Izihlungi zePawulo ze9.1 .X kunye ne -. - Geofumed
9.1 amanqaku lwangaku kwaye izihluzi .Wathi
Ukubhekisela kwizinto ezinjenge- "Ukusuka", "Midpoint phakathi kweengcambu ze-2" kunye ne "Extension" sivumele ukuba siqonde indlela i-Autocad ingabonisa ngayo amaphuzu angafananga ngokufanayo nejometri yezinto ezikhoyo kodwa ukuba inokufunyanwa kuyo, ingcamango yokuba abaprogram isetyenziswe ukuyila enye into yokudweba ebizwa ngokuthi "iifayile zeengongoma" esinokukubonisa ngokukhawuleza.
Cinga ukuba sinomgca kunye nezimbini ezimbini kwiskrini kwaye sifuna ukudweba umxube oqalayo we-vertex uhambelana kwi-axis e-Y kunye nephambili kwendulungu engundoqo nakwi-X axis kunye nomgca wokuphela kwesigcawu somgca. Oku kuthetha ukuba inqaku lokuqala loxande lingaba neengqinisiso zezinto zombini, kodwa ungathinti naluphi na.
Ukusebenzisa ngokunenzuzo izikhokelo kwizinto njengoko zibhekisela kwiimpawu zecandelo elizimeleyo le-Y kunye ne-Y axis, sisebenzisa "i-Point filters". Ngala mafayili, impawu zejometri yento - isikhungo sesangqa, umzekelo - singasetyenziselwa ukuchonga ixabiso le-X okanye i-Y kwenye indawo.
Masibuyele kwixande, umgca kunye neesangqa kwisikrini. Sathi ikhoneni lokuqala lexande ukuba iwindow yomyalelo isicela ukuba sihambelanise i-X yokudibanisa kunye nokuphela kwesigxina somgca, ngoko kwiwindow yomyalelo siya kubhala ".X" ukubonisa ukuba siya kusetyenziswa izinto kodwa ukubonisa kuphela ukubaluleka kwaloo mdibaniso. Njengoko sele sele kucacisiwe, ixabiso le-Y lilungelelaniso lihambelana neziko lesangqa esikhulu. Ukusebenzisa le fayile yokucoca ngokubambisana nokubhekisela kwento, cinezela "." Kwiwindow yomyalelo. Ikhonkco elichaseneyo lexande lihambelana kwi-axis yayo ye-X kunye nomnye umgca womgca, kodwa kwi-axis yayo ye-Y kunye nendawo yebhanki encinci, ngoko siya kusebenzisa inkqubo efanayo neefayile ezicwangcisiweyo.
Kwiimeko ezininzi, sinokusebenzisa kuphela isixhobo sokucoca kunye nenombolo yenkcazelo kuphela ye-X yokulungelelanisa kunye ne-Y yokulungelelanisa sinika ixabiso elipheleleyo, okanye ixabiso elipheleleyo kwi-X kunye nokucoca ngokubhekiselele ku-Y. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa okudibeneyo izihlungi kunye neenkcukacha zezinto zivumela ukuba sizisebenzise ngokufanelekileyo izinto ezikhoyo, nangona zingabambisani okanye zihambelane ngokupheleleyo kwiindawo zazo kunye nezinye izinto.
Post edlulileyo«Edlulileyo ISAHLUKO 9: osnap
Post Next 10 ISAHLUKO: YOKULANDELELA osnapOkulandelayo "